မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | MyJobs
Result page 1 for မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား
အလုပ် 17 ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
Service Manager (Medical Devices)
ရန်ကုန် | အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | $ လျှို့၀ှက်အပ်သော
We are urgently looking forasuitable candidate who are esteem to work with our organization. Job Description – Service Manager (Medical Devices) x 1 post, Job Category – Engineering, Contract Type – Full Time, Degree – Any graduates - AGTI/B Tech/BE/ME is preferred
We are looking for the transport officer who is well-experienced in transport field.
မန္တလေး | အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | MMK 800,000 - 1,000,000
Responsible for the supervision and coordination of on-site epidemic prevention, social security and fire protection during construction and operation period;, Responsible for working with the government and related authorities on epidemic prevention, social security and fire prevention,To complete other work assigned by the leaders
Product Specialist (Mawlamyine)
မြန်မာပြည်အတွင်း | အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | $ လျှို့၀ှက်အပ်သော
လွန်ခဲ့သော5ရက် က
Supervise and coordinate sales teams to achieve medical sales targets for assigned businesses/territories and overall business objectives
Sell medical products to achieve sales targets for assigned businesses/territories and overall business objectives
ရန်ကုန် | အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | MMK 200,000 - 400,000
ရန်ကုန် | အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | MMK 600,000 - 800,000
လွန်ခဲ့သော6ရက် က
Sales & Marketing Manager ( Pharmaceutical)
ရန်ကုန် | အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | MMK 400,000 - 600,000
K.T.Z Company Limited
မန္တလေး | အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | $ လျှို့၀ှက်အပ်သော
လွန်ခဲ့သော3ပတ် က
Supervise the team to achieve the shared goals.
EMP (Excellence Medicare & Pharmaceutical Co., Ltd.)
To contribute marketing campaign To implement and coordinate marketing activities To supervise marketing staff & PG
Medical Representative Supervisor
Job Summary To support the organization with its development and to fulfill both organization and employees needs and wants.
Procurement Officer (Overseas Purchasing)
လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: ထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များ
စာရင်းကိုင် ၊ စာရင်းစစ် နှင့် ငွေကြေးအလုပ်အကိုင်များ2ဆေးဝါး နှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ3ထောက်ပံ့ရေး နှင့် ၀ယ်ယူရေး အလုပ်အကိုင်များ2ရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားခြင်း နှင့်ဆက်သွယ်ရေး အလုပ်အကိုင်များ4လူ့အင်အားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များ2အင်ဂျင်နီယာ နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်များ 1 အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ 3
မန္တလေး2ရန်ကုန် 14 မြန်မာပြည်အတွင်း 1